Moshi inotangisa tambo kuchaja MacBook yako uye chero USB-C chishandiso | Ndinobva mac
Apple yakasarudza USB-C kekutanga pane yayo 2015 MacBook, anopfuura makore matatu apfuura. Zvisinei nenguva yadarika Zvishandiso zvinotora mukana wakazara wesimba reUS-C hazvishoma, uye mitengo inoramba yakakwira uchienzaniswa neyakajairwa USB.
Moshi achangobva kuburitsa zvishongedzo zvitsva zvakanangidzirwa kuUSB-C uye pakati pavo takakwanisa kuyedza izvi Imwe mita yekuchaja tambo ine yekunyepedzera inogumisa uye yakavakirwa nemishonga zvinhu izvo zvinovimbisa kusimba kwayo pamutengo unonakidza kwazvo. Isu tinokuudza kwedu zvimiro pazasi.
Iyo USB-C kune USB-C tambo ine Power Dhirivhari 3.0 iyo ichatibvumidza isu kubhadharisa kusvika ku60W, saka tinogona kuishandisa kudzosazve MacBook yedu pasina dambudziko kushandisa zviri pamutemo Apple majaja (kana vamwe), pamwe nechero mumwe mudziyo unoenderana nerudzi urwu rwekubatana. Yakagadzirwa naKevlar Dupont uye ine anodized aluminium zvinongedzo Tinogona kuisa tambo kumashandisirwo akaomarara atinogona kufungidzira pasina matambudziko, kuva akasimba zvakanyanya kupfuura echinyakare Apple tambo dzepurasitiki uye kutsigira kusvika anopfuura zviuru gumi zvekutenderera. Zviripachena kuti ini handina kuyedza magumo aya, asi ini ndinogona kutaura kuti iyo-yekubata-kunzwa ndeyeyeyo inodzivirira uye yakanyatsogadzirwa tambo.
Chinhu chakakosha kwazvo kufunga nezve idzi tambo dzeUSB-C ndiyo mhando yedhata yekufambisa data. Sezvo zvisiri ese USB-C anotsigira Simba Dhirivhari, haazi ese USB-C ari USB3.0 kana 3.1. Iyi ndiyo kesi yeiyi Moshi tambo, iyo inotsigira Power Dhirivhari uye ndosaka ichitibvumidza kubhadharisa MacBook yedu, asi maererano nekutamisa data inoramba iri mune USB 2.0 maratidziro nekumhanyisa kumhanya kwe480 Mbps.Iyo tambo yakakodzera yekushandisa sechaji tambo uye kuitakura mukabhegi kedu, kusanganisira kunyangwe velcro kuti irambe ichichengetwa zvakanaka, asi yekufambisa data inogona kudonha zvichienderana nespeed yatinoda. Mupfungwa iyi yakafanana neiyo yepamutemo Apple tambo, zvakare USB 2.0, iyo ine mutengo wakakwira.
2 Image Garari
Iyi USB-C Integra tambo kubva kuMoshi yakakodzera kushandisa seimwe nzira kune yepamutemo Apple tambo kune ese mashandiro nemutengo. Yakavakwa ne-ultra-resistant materials, kusimba chinhu chinovimbiswa uye kutsigira mitoro inosvika 60W unogona kudzoreredza yako MacBook, Nintendo Shandura kana mafoni uye mahwendefa ane mhando iyi yekubatanidza pasina matambudziko. Yayo chete yakashata poindi kuva USB 2.0, saka haugone kutora mukana kune ese mabhenefiti ayo erudzi urwu rwezviteshi anopa muApple MacBooks. Inowanikwa muchitoro chepamutemo cheMoshi pa Iyi link kwe € 19,95 nekutumirwa mahara pamaodha anodarika € 60, inodhura pane yepamutemo Apple tambo, Yakagadzirwawo nezvimwe zvakajairika zvinhu.
Ultra-inodzivirira zvinhu (Kevlar neAluminium)
Kuendesa Simba 3.0 kusvika ku60W
Yakanaka kwazvo dhizaini nekuvharwa kwevelcro
1 mita kureba
USB 2.0 yekumhanyisa kumhanya
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » Accessories » Moshi inotangisa tambo kuchaja MacBook yako uye chero USB-C chishandiso
Tarisa uone kana uine "mshelper" malware mu macOS uye isu tinokuudza maitirwo ayo